US Extends Zimbabwe Sanctions Over ‘Accelerated Persecution Of Critics
By	Super User March 05, 2020	758	0
WASHINGTON — The United States has extended targeted sanctions imposed on some Zanu PF officials saying President Emmerson Mnangagwa’s government “has arguably accelerated its persecution of critics and economic mismanagement in the past year, during which security forces have conducted extrajudicial killings, rapes, and alleged abductions of numerous dissidents.”
“In the wake of the resignation of former President Robert Mugabe in November 2017, Zimbabwe’s national elections in July 2018, and President Mugabe’s subsequent death in September 2019, Zimbabwe has had ample opportunity to implement reforms that could set the country on a constructive path, stabilise the southern African region, and open the door to greater cooperation with the United States,” the statement said.
The White House further added: “These actions and policies by certain members of the government of Zimbabwe and other persons to undermine Zimbabwe’s democratic processes or institutions continue to pose an unusual and extraordinary threat to the foreign policy of the United States. Therefore, I have determined that it is necessary to continue the national emergency declared in Executive Order 13288 with respect to Zimbabwe.”
Zimbabwe signed a US$1,5 million deal with some American-based organisations that were hired to lobby for the removal of the sanctions. Brian Ballard, a fundraiser for Trump’s 2016 presidential election, is the head of one of the entities hired by Zimbabwe last year.
The Zimbabwe sanctions programme implemented by the Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) began on March 7, 2003, when then President George Bush issued an executive order imposing restrictive measures against “specifically identified individuals and entities in Zimbabwe, as a result of the actions and policies of certain members of the Government of Zimbabwe and other persons undermining democratic institutions or processes in Zimbabwe.”
*Source of VOA*
« Lusaka based Bus driver granted an interim injunction Gassers to be Crushed and Burried »